Ikhokelo Eboniswayo Kwiintlobo Ezilishumi Zokubulala
I-Anesthetic yokugqibela Ijirney yokubulala. Iimbopho zibamba intolongo phantsi ngexesha lokujova. Ifoto ngokukhawuleza yeSebe le-Correction of Arizona.
Izindlela ezili-8 ezahlukileyo zokubulala umntu
Abalawuli baye bahlala beceba iindlela ezinobungozi zokuqothula amabanjwa: babilise ngeoli, bawaphonsa ngeenyoka, bawadonsa phantsi kweenqanawa, bawabethe, bawabulale, bawafihle ubomi, bawubumbe baze bawabethe, kunye nokuqhubekeka. Namhlanje, oorhulumente bavame ukuba baphumelele-okanye ubuncinci bokudala - ngendlela ababulala ngayo abemi babo.
Izindlela ezisibhozo zokuxubusha ezixutyushwa apha zizo zixhaphake kakhulu kwiindawo ezisemthethweni kweli hlabathi lanamhlanje. Kodwa kubalulekile ukukhankanya ukuba oorhulumente (kubandakanyeka, ngamanye amaxesha, uRhulumente waseMelika) beyaziwa ngokubulala amabanjwa ngamanye, "ngaphantsi" i-"official" ithetha-ukusuka kwizibhamu (akukho mibuzo ibuzwa) kwizixhobo zamakhemikhali (njengoko uSaddam Hussein egunyazisene namawaka yamaKurds aseIrabhu ngexesha le-Anfal Campaign ka-1988) kwindlala (iindlela eziphambili apho urhulumente waseNorth Korea ulawula ukubulala amaninzi amaninzi ngaphandle kokunikezela izigwebo zokufa ngokusemthethweni).
I-injection yefayili yindlela exhaphakileyo kakhulu yesihlwayo semali e-United States namhlanje, kodwa oku akuthethi ukuba yinto ephucukileyo kakhulu.
Ngowe-1982, iUnited States yaba lizwe lokuqala ukufezekisa ngamagciwane. I-China yaba ngowesibili ngo-1997, kwaye amanye amazwe amaninzi sele elandela. I-injection ye-Lethal yenziwe yinto eqhelekileyo yokusebenza e-United States. Yonke into eyenziwa ngo-2005, kwaye yonke into eyenziwa yodwa ngo-2004 no-2006, yayingumjovo obulalayo. Kwiminyaka emilandelayo, nangona kunjalo, kukho ukunyuka okunyukayo ngokufa ngenxa yengozi ebulalayo ngenxa yokuba kukude neendlela ezingenabuhlungu zokufa eziphakamisayo. Ukongezelela, iinkampani ziye zanqikaza ukubonelela ngeekhemikhali ezifunekayo. Kukho izimpendulo ezimbini ezahlukeneyo kule nto:
ukongeza izichaso kwisigwebo sokufa kuzo zonke iimeko
imvuselelo yenzalo ngezohlwayo zokufa ezixhasa ukubulawa ngokuxhoma okanye ukudubula iqela.
IJamani yaseJamani yasebenzisa injeni ebulalayo njengenxalenye yeProgram ye-T-4 ye-Euthanasia ngasekuqaleni kwe-1940, nangona ibe yatshatyalaliswa yirhasi yetyhefu.
Umbulali, ngokuqhelekileyo umntu ojobayo izidakamizwa ngesandla (umatshini wokufakelwa obulalayo awusasetyenziswa ngokubanzi ngenxa yokungaphumeleli komatshini), unobangela izilwanyana ezintathu ngokulandelelana:
5g I-Pentothol (i-sodium thiopental), enenjongo yokunyusa i-coma.
I-100mg i-Pavulon (pancuronium bromide), ebangela ukukhubazeka.
I-100 mEq i-potassium chloride, eyekelela intliziyo.
I-Pentothol ayisoloko idala i-coma, ishiya ukuphazamiseka okungenani ukuba amanye amabanjwa abulawe ngumjovo obulalayo angaba nobuhlungu obukhulu ngenxa yokulawulwa kwe-potassium chloride-kungekho naluphi na uhlobo lokubonisa loo ntlungu, ngenxa yokukhubazeka okwenziwa Pavulon. Ngenxa yesi sizathu, iNkundla ePhakamileyo yase-United States igweba kwi- Hill v. Crosby (ngo-2006) ukuba izibophelelo zokufa zingabangela umngeni wendlela yokubulala injini phantsi kwe-Eighth Amendment.
Ukubulawa kweCandelo leGesi
Ngokulahla i-Dying Breath Igumbi legesi elinguhlaza elincinci eliseSan Quentin, apho zonke izigwebo zokufa zaseCalifornia ziqhutywa. Namhlanje igumbi lisetyenziselwa ijojo ezibulalayo; ICalifornia yaphelisa ukubulawa kwegesi ngobutshoni ngo-1995. Umfanekiso ngokukhawuleza weSebe laseCalifornia lokuLungiswa kunye nokuBuyiselwa.
Nangona imbali yayo, igumbi legesi lalipapashwe njengendlela efanelekileyo yokusebenza. Ubuncinane kubonakala ngathi indlela abajonga ngayo ...
Ngomnyaka we-1921, abagwebi kwi-State of Nevada, besoyika ngesitulo sombane esichukumisayo, bafuna uhlobo olunobundlobongela obuncinane. Bagqiba ekubeni bakha amagumbi anqamlekileyo apho amabanjwa angavalwa khona, amagumbi aza kuthi aqhutywe ngegesi ye-cyanide ebulalayo. I-Nevada yokuqala yasebenzisa inkqubo ngo-1924, kwaye yahlala ithandwa iminyaka engaphezu kwama-50, nangona ithe yavela phantsi ngenxa yenkathazo engalindelekanga (jonga ngezantsi). Ukuphela kwegesi egumbini lenzeke ngo-1999, kwaye kuphela amane asele awamvumela njengento yokukhetha.
I-Cyanide yegesi (iZyklon B) yayiyiyona ndlela yokuqala yokubulala abantu baseNaziya eJamani, njengoko yayingasetyenziselwa ukubulala abantu abangama-2 500 ngexesha elinye.
Ibanjwa liboshwe kwisihlalo ngaphakathi kwegumbi lokugaya egesi. Ummangaleli (omi ngaphandle kwekamelo, okwenene) uyakhupha i-lever yehla i-potassium i-cyanide ipellets ibe yi-acid ye-sulfuric acid, ikhukula igumbi ngegesi ye-hydrogen cyanide.
Ukufa kunokuphuza kakhulu kwaye kubuhlungu, njengoko kuboniswe kwiziganeko ezininzi eziphambili ezivela kwi-1980s nakuma-1990. Enye yezinto ezingathandabuzekiyo nguYimmy Lee Grey ngo-1983, othe wanyuka, wagxuma, waza wafaka intloko yakhe kwipayipi yensimbi imizuzu elishumi njengoko i-cyanide yaqala ukusebenza. Ngo-1996, iNkundla yeeNkqutyana zeZibheno ze-9 yagweba ukuba ukusetyenziswa kwegesi yetyhefu kuyisijeziso esichukumisayo.
Ukukhwela Umbane Umnquba wase-Afrika-waseMelika ulungele ukuqhutyelwa "kwi-Old Agarky, Ifoto ethathwe nge-1900 nguWilliam M. Van der Weyde. Umfanekiso othotyelwe kwiThala leNkcazo.
Akukho ndlela yokusebenza eye yabamba ingcamango eyaziwayo yaseMerika njengesihlalo sombane.
Isihlalo sogesi siyi-American quintessentially. Akukho ncinane kunokuba uTomas Edison unxuse ukuba ayisebenzise okokuqala, nangona iinjongo zakhe zokwenza oko zazingekho ngaphantsi kwezinto ezicocekileyo . Ukubulawa kokuqala kwehlabathi nge-electrocution kwenzeka ngowe-1890, kwaye yahlala yindlela eqhelekileyo yokusebenza kwaze kwaba ngama-1980. Izibopho zokufa ezimashumi ezilishumi zisenokuthi zikhethe isihlalo sombane (kwaye kwiminyaka yamuva, amabanjwa amabini anayo - ngo-2004 kunye no-2006, ngokulandelana).
Intolongo ihlanjululwe, ikhonkiselwe kwisihlalo, kwaye ifakwe ngee-electrodes ezixhomekeke kwiziponti eziqhubayo - enye entloko, enye emlenzeni-ukudala ngoku ngqo. Emva koko intolongo ikhutshwe. Umbulali udonsa umtshini, kwaye u-2,000 volts ubalekela emzimbeni wesibanjwa njengoko ukushisa komzimba kwangaphakathi kufikelela kumadireji angu-140. Ukuba kwenziwe ngokuchanekileyo, le nkqubo kufuneka ukuba ibangele ukungazi kakuhle ngokulandelwa kukufa kwangoku kwangoko.
Inkqubo inzima kakhulu ukucinga, kwaye ingatshisa iimbopheleleko eziphilayo ukuba zenziwe ngokungalunganga. Iingxelo ezihlaselayo zokuchithwa kwee-electrocutions ziye zenza isihlalo sogesi sibe yimpendulo yexesha elidlulileyo, ukhetho olukhethwe ngamanye amabanjwa abesabayo injeni ebulalayo okanye bafune ukuphuma ngokugqithiseleyo.
Ukuphunyezwa nguBantu abaFuna
"Kukulungele, njongo ..." Kulo mfanekiso ukususela ngoJuni 4, 1913, intombazana egama linguAntonio Echazarreta ibulawa ngabaguquleli baseMexico abanenxaxheba yakhe ekukhuseleni indawo enkulu. Umfanekiso othotyelwe kwiThala leNkcazo.
Ngokuqhelekileyo enxulumene nomkhosi, iqela lokudubula linye yeendlela ezincinci zokusetyenziswa - kwaye, ukuba zenziwe ngokuchanekileyo, enye yezona zixhaphakileyo.
Imbali: Ukubulawa kwexesha lokudubula i-squad date ekude emva kwezibhamu ngokwabo, kodwa abantu babini kuphela abaye baphonywa ngokudubula e-United States kwiminyaka yamuva (ngo-1977 no-1996 ngokulandelana). Lihlala likhetho lokubanjelwa ejele laseIdaho, e-Oklahoma nase-Utah.
I-Overtones: Ukufa ngokubulawa kwabantu abaqhelekileyo kubhekwa njengokushona kwejoni kunokufa kwesigebengu, kwaye ngoko ke kuhlonipheke. Kwakhona kuphela uhlobo lokusebenza olulolu hlobo olugcina ubuninzi bezitho zentolongo, ukuvumela umnikelo wombutho.
Indlela eSebenza ngayo : Ukubulawa kwezigqeba zokudubula kunzima kakhulu kwiindawo eziqhelekileyo eUnited States ukuba kunzima ukuthetha ngomgangatho osebenzayo oqhelekileyo, kodwa ngokusesikweni ixhoba linamathele esihlalweni, iintlanuhooters ezintlanu zijolise entliziyweni yentliziyo, kwaye zonke iintlanu zitsala ukuqala. Omnye we-sharpshooters uxhobile ngokufihlakeleyo ngeenxa zonke, oku kuthetha ukuba ibhulobho nganye inokuphumla ngokukhululekile ngokwazi ukuba kukho ithuba eli-20% lokuba akazange adubule intolongo.
Iingxaki: Nangona zombini ukuhlaselwa kwamagosa okwexeshana okwenziwe kwangoku, kwakungekho nto engakuvakalayo ngaphambili ukuba zonke iintlanu ezijikelezayo zingene kumbanjwa ngaphandle kokumbulala - zidinga ukuba ibhoshongo yesithandathu iqotye ijikelezileyo ukuze ikhuphe buhlungu.
Intambo yomntu ofileyo Umqhubi wesitimela owaziwayo uTom "Black Jack" uKetchum ulungiselelwe umthi ngo-Aprili 26, 1901. Ngenxa yephutha lomntu, intambo iya kuba yinde kakhulu - ivumela umzimba wakhe ukuba wehla ngokukhawuleza ngexesha lokuhla, . Umfanekiso othotyelwe kwiThala leNkcazo.
Nangona ukufa ngokuxhoma kungumzekelo omdala wohlwaywa, kuvelisa izikhumbuzo zenkcubeko ye-Southern lynchings kunye neWild West "ubulungisa belizwe."
Ukulinda ngenye yeendlela ezininzi zokuqala. Ngokomzekelo, iNcwadi kaEstere , amaziko ekuxhonywe kobugebengu bokubulala u-Haman, kwaye umthetho waseBrithani kunye ne-US uye wahlala ehlanganisa ukufa ngokuxhoma. Nangona ezininzi iindawo ziphelile lo mkhuba, i-New Hampshire kunye neWashington zivumela abathinjwa ukuba bakhethe olu khetho. Ukulengela kwezomthetho kutshanje kwe-US kwenzeka ngo-1996.
Ngaphezulu kwekhulu leminyaka edlulileyo, ukuxhoma sekuye kufaneka kunye ne-lynchings yama-Afrika aseMerika eMzantsi Melika, kunye ne-Hispanics eMidwest naseCalifornia.
Ibanjwa limi emgodini, kwaye intambo ihla ephuma kumthi wokhuni ophezulu. Intambo ihlanganiswe entanyeni yentolongo "kwi-Hangman's", eyenza ifanelwe xa ityunyiwe. Umbulali udonsa i-lever evula umtya kunye nokulahla intolongo, ofa ngokukhawuleza ngenxa yentamo ephukile.
Ubude betambo kufuneka bubekwe ngokulinganayo ngokulinganisela ubunzima bebanjwa. Ukuba intambo imfutshane kakhulu, i-velocity enganeleyo yenziwe ukuba iphule intamo yentolongo kwaye intolongo ixakeke ukuba ibulale. Ukuba intambo ide kakhulu, i-velocity excessive iveliswa kwaye i-decapitation ingabangela. Nangona intambo ibude obude ngokufanelekileyo, intolongo enentamo enkulu okanye eqinileyo ingase ihlupheke ukutyunjwa kunokufa.
Ukufa ngokubethelwa njengeSigwebo soKhuseleko Ingcaciso evela kwi-Ercole Ferrata "i-Martirio di Santa Emerenziana" (1660), imifanekiso yemarbo eqoshwe ukuba ihlobe icawa yaseSal'Agnese eAgone yaseRoma, eItali. Ukudweba kubonisa uStor Emanaziana ogwebile ngamatye, ethuneni eliseTal Agnes. Ummandla woluntu. Umfanekiso ohambelana neCandelo loKuvuselela ubuGcisa.
Ukubethelwa kwamatye kumelele kwezinye iindidi zesigwebo esiyinkunzi ngenxa yokuba lonke uluntu lithatha inxaxheba ekubulaleni.
Ukukhanda ngamatye ngokuqinisekileyo kuyindlela yokudala yehlabathi yokudala. Kudala nje ngeencwadi ezibhaliweyo, kunye nesigwebo esiqhelekileyo sokufa esichazwe eBhayibhileni (esenza ukuba isitatimende sohlwayo sikaYesu esichasene nokubulala ukufa kuYohane 8.7: "Lowo ongenasono makabe ilitye lokuqala"). Nangona kungakaze kube yindlela esemthethweni yokusetyenziswa e-United States, iqhutyelwa kwenye indawo ehlabathini, ikakhulukazi kuMbindi Mpuma kunye nase-Afrika yasezantsi.
Ukubethelwa ngamatye ngokukodwa kukunyanzeliswa ngumthetho wamaSulumane osisiseko somthetho we- sharia , ngokuqhelekileyo ngezizathu ezimangalisayo. Ngo-2004, uZhila Izadyar oneminyaka engama-13 ubudala wagwetywa ngokubulawa ngamatye e- Iran ngenxa yokudlwengulwa ngumzalwana wakhe omdala. Nangona isigwebo sagqitywa emva koko emva kokukhala kwesizwe, izivakalisi ezibethekayo eziqhelekileyo zihlala ziqhutywa kwihlabathi elikhulayo.
Intolongo ingcwatyelwe ukuya kwinqeni (ukuba yindoda) okanye ukuya kumahlombe akhe (ukuba ngabafazi) kwaye iphoswe ngamatye ngesihlwele sevolontiya kuze kube yilapho ihlaselwa. Ngaphantsi kwemiqathango yamatyala amaninzi, amatye makabancinci ngokwaneleyo ukuba ukufa kungenakulindeleka ukuba kubangelwe kuphela okanye ukubetha okubini kuphela, kodwa kubanzi ngokwaneleyo ukubangela ukulimala ngokomzimba. Ukwenziwa komyinge ngokumxuluba ngamatye kunzima kakhulu, ukuhlala okungenani imizuzu eyi-10 ukuya kwe-20.
Ukufa KweeKumkani Ukushicilelwa okubonisa ukuphunyezwa kukaKumkani Louis XVI ngexesha leNguqulelo yesiFrentshi. I-guillotine, isixhobo esiyinkimbinkimbi esenzelwe ukuzenzekela ngokufa ngokubethelela, sele siwa phantsi kwefashini. Umfanekiso othotyelwe kwiThala leNkcazo.
Ukuphunyezwa ngokubethelwa, nokuba ngaba kwenziwa ngekrele okanye kwi-guillotine, yenye yeendlela ezibuhlungu kakhulu zokugwetywa. Ubuncinane ngokukhawuleza ngokukhawuleza.
I-Beheading mhlawumbi yindlela ekhethekileyo yohlwayo ekhoyo kwihlabathi la mandulo, kunye neyona nto inokwenzeka yokulawula ubuthi. Nangona kungakaze kube yindlela esemthethweni yokusetyenziswa e-United States, iyenziwa kwenye indawo. Eyona nto ibalulekileyo, ihlala yindlela ekhethiweyo yokusebenza eSaudi Arabia.
Enye "inzuzo" yokubethelwa kukuba ivumela ababulali ukuba babonise intloko yexhoba njengesilumkiso. Lo mkhuba uphindela kumaxesha amandulo, kodwa omnye ubeka umzekelo wokutshatyalaliswa kwangoko kwenzeka emva kokuvukela kukaNat Turner, njengoko izinto ezifuna ukuphendulela iTerror kuthiwa zibulala ama-slave athile asondeleyo kwaye aphakamisa iintloko zawo kwiintonga zengcingo njengesilumkiso.
Ixhoba livinjelwe, ngokuqhelekileyo linyanzeliswe ukuba liguqe, kwaye umbulali uyanqumla intloko ngekrele okanye ummese. Ngexesha lokuvuselela iYurophu (ininzi eyaziwayo emva kweSifuduko saseFransi), le nkqubo yenziwe ngokuzenzekelayo ngendlela ebizwa ngokuba yi-guillotine, eyayiphonsa iqhosha elinzima entanyeni yentolongo-evumela ukuba i-decapitation ecocekileyo.
Ukuhlaselwa kungabakho uhlobo oluthile lokuthotywa - ubuncinane xa kuthelekiswa nezinye iindlela ezisetyenziswayo eUnited States - ngaphandle kokuba umenzi omeleleyo unamandla kwaye unokufaneleka. Xa umbulali engekho, ukufa kunganciphisa kwaye kube buhlungu kakhulu.
Ingqwalasela kunye nembali yokufa ngokubethelwa kwembombo Iinkcukacha ezivela kuPieter Brueghel oMncinci "Ukubethelwa" (1617), ebonisa ukuphunyezwa kukaYesu Kristu kunye nabanye ababethelelwe emithanjeni ecaleni. Ummandla woluntu. Umfanekiso ohambelana neCandelo loKuvuselela ubuGcisa.
Enoba kwenziwa ngabaRoma eGolgotha ​​okanye ngabasebenzi base-US ku-Abu Ghraib, ukubethelelwa kwesinye isona sezona zinto zihamba phambili, ezona zihamba phambili zenzeke.
Imbali: Ukubethela kwaye kwaqhelekileyo kwiRoma lasendulo. Nangona akakaze asemthethweni eMelika, kuyafaneleka ukuba umbuzo weCIA abulale uMaddel al-Jamadi kwintolongo yase-Abu Ghraib ngo-2003 ngokubethela. Ilizwe elilodwa lokuzibethela esiphambanweni njengefomu esemthethweni yesigwebo senkunzi yiSudan.
Ukufa ekubonakaliseni: AmaRoma amandulo ayeza kubethela abavukeli ngamaninzi, emva koko ayeke izidumbu zabo zixhomekeke nje ukuba ziqhubeke zixhomeke. Emehlweni amaRoma, iziphumo zokuphazamisa ukubethelelwa kwesiphambano mhlawumbi zilungele ukuba yintoni enye enye indlela engasebenzi kakuhle.
Indlela Eyisebenzayo: Ibanjwa lisuswa phantsi, iingalo zigcinwe kumacala okanye ngasemva, kwaye zishiya zodwa. Ngexesha elide, intolongo iya kukhathala kwaye iwele phambili - iminyanisa imiphunga kwaye ibangele i-asphyxiation. Ukufa ngokubethela esiphambanweni kunokuthatha iiyure okanye iintsuku.
IJury Trial Stage yoLwaphulo-mthetho
Isiteyathelo sokuLahlwa kweNkundla yoLwaphulo-mthetho
Iimidlalo zeKrismesi kunye neFredish Favorites
Imibuzo 'yeSiqhingi' yeSifundo kunye neNgxoxo
I-Harry Potter Ingxabano
I-Step-by-Steo Conjugation ye "Maintenir" (Ukugcina)
Iintlanzi zangempela, iDiptera ye-Order
Incoko yeNtetho Inkcazo kunye nemizekelo
Isingeniso kwi-Reserve Ratio